I-Bancc™️ - Boom, Bam, Bancc!
Isiqinisekisi & Abadali
Isicelo Sokuqinisekisa (Akunasi)
I-Bancc™️ idala inkundla yokuhamba elandelayo Hlanganyela nathi ohambweni olulandelayo lwe-FinTech lwekhulunyaka. Kubantu, ngabantu. I-Whitepaper Shintshanisa futhi Thenga i-crypto ngemali engu-0%. I-BanccDex™️ iyi-Exchange/Aggregator ehlukaniselwe izwe eqoqa wonke ama-swaps ahlukene ku-Binance Smart Chain (BSC), inethiwekhi ye-Ethereum (ETH) kanye ne-Polygon ibe isicelo esisodwa. YETHULA UHLELO LOKUSEBENZA Amadokhumenti Zuza kufikela ku-500% APY kwa-BanccStaking™️ I-BanccStaking™ iyinkundla ebambekayo ehlinzeka ngezinto ezihlukene ze-Beta, i-Alpha, i-Omega ne-Valhalla. YETHULA UHLELO LOKUSEBENZA Amadokhumenti I-BanccDAO™️ ikhuthaza umphakathi ukuthi wenze ushintsho, kube kanye I-BanccDAO™️ iyiSicelo Sokuvota Sokubusa Okunabile somphakathi we-Bancc™️ ukuhlinzeka ngeziphakamiso futhi uthole nesilinganiso sokuthi singakanani isiphakamiso esifunwayo. YETHULA UHLELO LOKUSEBENZA Amadokhumenti Unentshisekelo yokusebenzisana? Xhumana nathi namuhla futhi sizolungisa okuthile okuzuzisa izinhlangothi zombili Xhumana nathi Amadokhumenti
I-Bancc yinkampani ye-Blockchain ematasatasa ekudaleni inkundla yezimali elandelayo ehlukaniselwe izwe ngokuvala igebe phakathi kobuchwepheshe obukhona obunamathuba e-blockchain.
Thenga i-sBanc lapha!
Imithombo yezindaba ephezulu iyasiqaphela
Ungase usazi kusuka...
Isinyathelo esisodwa ngesikhathi
Izici ze-Bancc Ecosystem
Imakethe yomhlaba wonke kanye ne-cryptocurrency ikhawulelwe kuzinketho zezimali ezibizayo nezinensa ukuzisebenzisa. Ukushiya imakethe enkulu ishiywe ingakathintwa. Ukuba mfushane kwezinye izindlela ezingcono, yilokho ebesibambelele kukho kuze kube manje...
Thumela Imali emhlabeni wonke ngesekhondi elingu-1 usebenzisa uhlelo lwethu lokusebenza olulula ukulisebenzisa
Thengisa kalula i-cryptocurrency oyikhonzile ngohlelo lwethu lokusebenza olulula ukulisebenzisa
Khokha nge-debit / credit BancCard™️ noma ukhokhe ngokuqondile nge-cryptocurrency wallet. Imali yakho, ukukhetha kwakho
Misa isitolo sakho esiku-inthanethi ngokuchofoza okumbalwa nge-Bancc™️ Marketplace
I-Bancc™️ Imikhiqizo Namasevisi
I-BanccSwap™️ / Q2
I-BanccSwap™️ iwukushintshaniswa okuhlukaniselwe izwe nezinkontileka ezihlakaniphile ezihloliwe ukuze kuqalwe ukwakha imali kumapheya azayo ethokheni yeBhange njenge-BUSD, USDT, WBNB noma ukunikeza imali kunoma iyiphi ithokheni ku-ecosystem ye-Binance Smart Chain.
I-BanccYield™️ / Q2
I-BanccYield™️ iyinkundla yokulima enesivuno esihlukaniselwe wena ukuthi ulime i-sBanc ngendlela elula nekhuthazayo. Nikeza okukodwa kwamapheya futhi uthole umvuzo ku-sBanc.
I-BanccCEX™️ / Q2
I-BanccCEX™️ iwukushintshaniswa okuphakathi nendawo lapho uzokwazi ukuhwebelana ngamapheya afinyelela kwangu-160+ ngokusekelwa okukhulu kwezimali kwamanye ama-cryptocurrencies njenge-Bitcoin, i-Ethereum, i-Dash njll. I-BanccCEX™️ iwumkhiqizo obalulekile ku-ecosystem ye-Bancc™️ futhi ngeke inikeze amakhono okuhweba kodwa nezinketho zokuboleka/ukuboleka ukuze abasebenzisi bazuze kuzo.
I-BanccAccount™️ iyi-akhawunti yakho yomuntu siqu ukuze ube nombono jikelele wezimpahla zakho ze-fiat kanye ne-cryptocurrency. Oda i-BancCard™️ yakho bese uqala ukulondoloza izinkokhelo kukho konke okwenziwayo uma ubeke amathokheni akho ku-BancChain™️.
I-BanccNFT™️ izoba ingxenye ekhethekile nelinganiselwe ye-NFT ukuze abasebenzisi bathole izandla zabo ezizoba nesethi ehlukile yezimpawu zedizayini ze-NFT ngayinye ethile. Izici zizoba phakathi kwemigqa yoku-oda kwangaphambilini kwamakhadi edebithi azayo ngaphandle kwezindleko zokuhweba.
I-BanccPay™️ iyisango lokukhokha lezimali ze-fiat kanye ne-cryptocurrencies. Yamukela wonke umuntu yonke indawo i-Visa, MasterCard, American Express njll futhi uyidlulisele ngokuzenzakalelayo nge-BanccCex™️ kuya ku-fiat noma i-cryptocurrency.
I-BanccMerchant™️ iwuhlelo olusebenza ngokugcwele lwe-Point-of-Sale ukuze lunikeze ukuguquguquka nokunwebeka kalula kunoma yimuphi umthengisi ukwamukela futhi aqale ukuthengisa imikhiqizo/izinkonzo zakhe emhlabeni, kokubili ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Interoperable futhi Scalable
Okwenziwayo ngesivinini sombani & kufika ku-10,000 Okwenziwayo ngomzuzwana
Zuza i-$BANC ngokugijima
I-CEFI & DEFI
Izinhlamvu zakho zemali, amathuba akho
Shintshanisa nge-cross-chain yezimpahla ezingaphezu kuka-100+
Ukwenza izixazululo ezilula
Umsebenzisi Wenzelwe Noma ubani
Enye yezinkolelo zethu eziyinhloko ukuthi yonke imali ye-Crypto / ithokheni kufanele ibe nokusetshenziswa. Amaphrojekthi amaningi aphuthelwa yileyo ngxenye kodwa thina asiyiboni. I-$BANCC izosetshenziswa inkundla yethu ukuxazulula inkinga yomhlaba wangempela futhi yilokho okusenza sihluke.
Umsebenzisi uthenga i-Bancc ngokuzenzakalelayo.
Abasebenzisi bathumela okuthengiwe
$Banc kumsebenzisi omfunayo
I-FIAT NOMA I-CRYPTO
Abasebenzisi bathola i-bancc futhi bangashintsha kunoma iyiphi i-fiat noma i-crypto
bakhetha ngokwenza noma ngokuzenzakalelayo.
Ilula futhi Iyinkimbinkimbi
Umbono wokuqala wadalwa. Besifuna ukudala umkhiqizo ovumela izinkokhelo ezinqamula imingcele ngokushesha, izinkokhelo ezilula neziphansi kakhulu emakethe. Ucwaningo luphethe ngokuthi abahlinzeki bamanje bahlinzeka ngamasevisi aphelelwe isikhathi, angathembekile futhi abiza kakhulu kubasebenzisi. Sifinyelele esiphethweni sokuthi ukuze sinikeze okuthile okungcono angeke sikwazi ukukhethela isigaba esithile sezomnotho senhlalo. Sinqume ukubuyekeza nokubuyekeza lokho manje esikubiza ngokuthi “inkundla”.
$50K Umjikelezo Wembewu Okhulisiwe
Siphumelele ngomjikelezo weMbewu engu-$50K futhi sathola enye imali yokuqala ukuthuthukiswa kwenkundla. Ngasekupheleni kuka-2021 sakha kabusha futhi sabuyekeza ubuchwepheshe esikholelwa ukuthi buyadingeka ukuze sakhe i-blockchain esebenzisekayo, esebenza kahle futhi efaka phakathi.
✅ - Ukuthengiswa Komphakathi ku-Binance Smart Chain(PinkSale)
✅ - I-BanccStaking™️
🚀- Umkhankaso Omkhulu Wokuthengisa (Uyaqhubeka)
⚡️- I-Ethereum Virtual Machine Compatibility
⚡️- Ukushintshaniswa kwe-Crosschain
⚡️- Isango Lokukhokha
❇️ - Okuningi okuzayo…
⚡️- Iphoyinti Lokuthengisa Uhlelo
⚡️- Inkundla yokugcina enayo yonke imikhiqizo engenhla ibe isicelo esisodwa
Siyisizathu sokuthi i-Crypto izoba yinsakavukela. Amaphutha embonini yokukhokha asezoba inkumbulo yesikhathi esedlule. Sekuyisikhathi sokuba i-crypto yenze lokho i-crypto eyayiklanyelwe ukukwenza - ukuxazulula izinkinga zomhlaba wangempela. Ngohlamvu lwethu lwemali lwe-$BANCC nazo zonke izici eziza nalo - sikholelwa ukuthi siyikusasa lemboni yokukhokha futhi sikumema ohambweni.
Umsunguli & Isikhulu Esiyinhloko Sezobuchwepheshe
Ungene esikhaleni se-crypto kusukela eneminyaka engu-13 futhi wadala eneminyaka engu-14 ibhizinisi lakhe lokuqala noBenjamin, ukwakha amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza. Unolwazi oluningi kakhulu lwezobuchwepheshe nolwazi olubucayi lokuthuthukiswa kwe-blockchain, ezomnotho kanye nengqalasizinda yokwakha ubuchwepheshe obuphambili. Uyingxenye ebalulekile ekwakheni impumelelo yeBancc.
U-Kåre Benjamin Byrkjeland
UBenjamin njengamanje ungumsubathi oqeqeshiwe futhi ungumtshali wempahla, amasheya kanye ne-crypto. UBenjamin unguzakwethu omncane kukhasino ye-crypto online. UBenjamin waqala inkampani yakhe yokuqala eneminyaka engu-15 ubudala kanye no-Nils-Julius futhi uneso elihle lokubona amathuba lapho abanye bengawaboni khona.
U-Isak ube ngumtshali wezakhiwo ophumelelayo kusukela eneminyaka engu-18 futhi manje useyi-CEO yenkampani ephumelelayo yokubaza. U-Isak unekhono elihle lokugxeka izinto futhi abone izinto ngelinye iso. Ngokuhlangenwe nakho okuhle kwezomnotho nokucabanga okujulile u-Isak uyazi ukuthi yini edingekayo ukuze aqhube ibhizinisi eliphumelelayo.
U-Oskar ungunjiniyela ogcwele isitaki ozoqedwa maduze. U-Oskar uneso elihle kakhulu lokudala nokuklama amawebhusayithi, izinhlelo zokusebenza nakho konke okuza nenqubo yokwenza lokho. U-Oskar uzoba ukwesekwa okuhle kakhulu ekudaleni nasekuholeni inqubo yokuklama yesikhulumi se-Bancc.
U-Mirian uyisengezo esihle eqenjini, onamakhono okuthengisa abucayi nanokuqonda. U-Mirian uzosetha, athuthukise futhi anakekele ukumaketha kwe-Bancc. U-Mirian ukhuluma kokubili isiNgisi neSpanishi ngokushelelayo futhi ngamakhono akhe ezilimi ezimbili i-Bancc ingafinyelela kubasebenzisi abengeziwe ngokwesekwa, okuqukethwe kanye nenkundla yezokuxhumana.
I-TC-Crypto inokuhlangenwe nakho okude nokugcinwa kweNethiwekhi nokusetha embonini ye-telecom. I-TC-Crypto ibinathi ngokoqobo kusukela ngosuku lokuqala futhi ibikulangazelela futhi inomdlandla omkhulu ngale phrojekthi. Sibona amandla amakhulu ngolwazi namakhono akhe engxenyeni ye-hardware/software ye-blockchain.
U-Nick unokushisekela okukhulu kwe-crypto ne-Bancc. Ngolwazi lwakhe lwangaphambilini kwezokumaketha nokubambisana. U-Nick uzobe egxile ekusabalaliseni ukuqwashisa ngephrojekthi ngokusebenzisana ngokumaketha kanye nokuthola amathuba amahle okubambisana.
URaza ungumbhali wendatshana omuhle kakhulu futhi uthanda i-cryptocurrency kangangokuthi waqala ukubhala ngayo. Ngokusekelwe ePakistan, u-Raza uzoba umlobi wokuqala oholayo we-Bancc, ebuyekeza umphakathi kanye nenkundla yezokuxhumana mayelana nezinto ezizayo ezijabulisayo!
Qiniseka ukuthi ujoyina futhi ubambe iqhaza kumaseshini amasonto onke we-AMA!
I-Bancc™ ingakwazi kanjani ukuncintisana ne-Crypto.com, Binance njll?
Umqondo oyinhloko wenkampani ngayinye ephumelelayo ugxile enzuzweni yebo. Umehluko omkhulu phakathi kwe-Bancc™️ nalezi zinkampani ukuthi lezi zinkampani zifuna ukukhiqiza imali engenayo ephezulu ngangokunokwenzeka kubanikazi bamasheya bazo futhi abaqinisekisi babo babonakala njengabalingani ngaphakathi kwecebo lenkampani yabo kanye nemodeli yemali engenayo. I-Bancc iletha uhlobo olufanayo lwemodeli yemali engenayo kodwa ngeso “lomphakathi”. Ukunciphisa isamba semali engenayo ye-Bancc nokuyandisa kubahlanganyeli ku-blockchain.
I-Bancc™️ ingakwenza kanjani zonke lezi zinto?
Ubuchwepheshe buyingxenye ethokozisayo yokuziphendukela kwemvelo futhi njengoba sibonile ngeBitcoin, ikakhulukazi kule minyaka eyishumi edlule. Izinto seziqala ukuvela ngesivinini esikhulu kunangaphambili. I-Bancc yasungulwa enkolelweni yokuthi ubuchwepheshe kufanele butholakale kuwo wonke umuntu futhi ukwenza kube nzima kubasebenzisi ukuxhumana nabo akuwona umgwaqo esikholelwa ukuthi ulungile. Ngokuxhumanisa ubuchwepheshe obukhona obunomlando wangaphambilini obonisa ukuzinza kanye nendawo yokukhula i-Bancc™️, izokwazi ukuvala igebe phakathi kwamathuluzi ebhange avamile kanye nomoya we-cryptocurrency.
Kungani i-Bancc idingeka?
Umhlaba uyashintsha futhi i-cryptocurrency isikhona ukuhlala. Into eyodwa nje, izimali. Uma ubheka kubasebenzisi abajwayelekile ukuthi ngokwesibonelo basebenzisa izinsizakalo zokuthumela imali. Izimali ziyafana. Akekho ofuna ukusebenzela mahhala kodwa ukukhokhisa imali ephezulu kulimaza ukukhula okungaba khona kwenethiwekhi. Ukuthumela i-10$ yenani akufanele kubize u-60$ ngesikhathi sokuqala. Umphakathi jikelele uzodinga okuthile okungabizi kakhulu futhi okulula ukukusebenzisa kunezinsizakalo zamanje ezihlinzekwa namuhla. I-Bancc™️ ixazulula le nkinga ngendlela ehlukaniselwe abantu ngokudala umnotho onempilo futhi ozinzile onganciki engxenyeni eyodwa, kodwa kubo bonke abasebenzisi abakunethiwekhi.
Bhalisela iphephandaba namuhla.
Qiniseka ukuthi uhlala unolwazi mayelana nezinto ezenzeka e-Bancc, yiba khona noma yiba nesikwele.
Ngokubhalisa, uyavumelana nokwethu Imigomo Namasevisi.
Ulwazi Lwenkontileka Ehlakaniphile
Igama Lethokheni - Bancc
Ithikha – sBanc
Ithokheni Yomvuzo - BTC
Imali Yokusebenzisa Imali - 1%
Inkokhelo ye-BuyBack – 0% (Ukushiswa Mathupha)
Imali Yokubonisa - 7%
Imali Yokumaketha - 3%
IMALI EYONKE - 11%